पेटमा जुका परे के गर्ने ? - Baikalpikkhabar
पेटमा जुका परे के गर्ने ?
– साँझको समयमा १० दिनसम्म, काँचो गाँजर खानाले जुका नष्ट हुन्छ ।
– २ सानो चम्चा नरिवलको तेल आधा कप दूधमा मिलाई पिउनाले पेटको जुका मर्दछ ।
– कागतीको पातको रस १० ग्राम मह मिलाई १० दिनसम्म लगातार पिउनाले पेटमा हुने सबै खाले किटाणुहरु नष्ट हुने गर्दछन् ।
– अडरको पातको रस मलद्वारमा लगाउनाले मलद्वार चिलाउने समस्या समाधान हुन्छ ।
– वायविडंग आधा चम्चा र रसवरी खानलो पेटमा भएका किटाणु नष्ट हुने गर्दछन् ।
‘मेरो डाक्टर’ पुस्तकबाट
आइतबार, २३ फागुन, २०७७, बिहानको ०९:५१ बजे